ဟောဒီက အလုပ်တွေဗျိုး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Jobs & Careers » ဟောဒီက အလုပ်တွေဗျိုး	3
Posted by Tawwin Pan on Jan 25, 2016 in Jobs & Careers |3comments
Melomap ကနေ ခေါ်ထားတဲ့ အလုပ်လေးတွေပါ။ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူများ လျှောက်လို့ရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Online ကနေလည်း အလုပ်လှမ်းလျှောက်လို့ရပါပြီ။
Data Mining/Machine Learning Engineer 1
သင့်အရိပ် says: ဗျို့… သူကြီး
ဒီ ရွာထဲကို… နေ့စဉ် ဝင်ကြည့်နေသူတွေထဲ…
အလုပ်လက်မဲ့ ဦးရေ…ခန့်မှန်းချေဘယ်လောက် ရှိမလဲ… .နောက်ပြီး (ကျနော့်လို)ရုပ်ချောတဲ့လူငယ်က ဘယ်လောက်…
.(.တော်ဝင်ပန်းလို)ရွာသူရုပ်ဆိုးဆိုးလေးတွေက ဘယ်လောက်… စသည်ဖြင့်… အာ့လေးတွေသိအောင် / စာရင်း တစ်ခု လုပ်ကြည့်ပါလား…
Tawwin Pan says: အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေသိရင် အလုပ်ရှာပေးမလို့လား၊ နာမည်က ဘာလို့ ပြောင်းသွားတာလဲ။
kai says: အလုပ်လက်မဲ့တယောက်မှ မရှိ..
ရုပ်ဆိုးသူမရှိ… တဲ့..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.